नामै नगरपालिका, गरपालिका भए पो गर्नु ! – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
नामै नगरपालिका, गरपालिका भए पो गर्नु !
२०७१ पुष २२, मंगलवार ०५:२६ गते
यस वर्ष भयो निकै कमाल ! पायो यो देशले १३३ नगरपालिका, झन्डै ७ महिनाभित्रै । भए भाग्यमानी तीन नगरपालिका जो यथेष्ट प्रयत्नै नगरी बने उपमहानगरपालिका । विकासको मुहान नै फुटाउन खोजेको आभास दियो, यो सरकारले । मानौँ पहिलेका सरकार थिए, नगरपालिकाविरोधी । सोहै्र आना विकासविरोधी । पूरा पूर्वाधार तयार हुँदाहुँदै पनि स्वीकृति नै नदिएर विकास नै रोकेर राख्थे उनीहरु । माग्न जानेलाई कडा कार्बाहीको चेतावनी दिन्थे । मानौँ, पुस्तकालय खोल्छु भन्दा पनि दण्डित गर्ने राणा सरकारसरह ।
दोस्रो संविधानसभाको चुनावपछि बल्ल विकासे सरकार आयो । अनि थाल्यो यसले भकाभक विकासप्रेमी काम गर्न । काम पनि द्रुत गतिमा घोषणा गरिदिए पुग्ने । पूर्वाधार चाहिँदा पनि नचाहिने । आधारभूत मापदण्ड पुगे पुगोस्, नपुगे नपुगोस् ! माग भैआए दिने नीति सारै गजबको । यस्तै–यस्तै सरकार भए उत्तम । केही जनता पनि मख्खै भोट पनि सट्टै । औधी खास्सा दुवैलाई ।
स्थानीय सरकारको चुनाव गराउने झन्झट बेसाउनुभन्दा त यो कत्ति हो कत्ति सजिलो । लोकप्रियताको शिखरमा सहजै उक्लन पाइने । आँखा चिम्लिने बित्तिकै काम बनिहाल्ने । प्रतिपक्षलाई पनि मनाइरहनु पर्ने झन्झट खलास । प्रतिपक्षीले विरोध गरे विकासविरोधी भन्दिए भैगयो । अनि, कसले हिम्मत गर्ला ? न कानुन फेर्नुपर्ने चटारो हुने, न त उम्मेदवारी प्रक्रियाको झमेला हुने । साँच्चै सस्तैमा विकासे सरकारको उपाधि ।
अनि ग¥यो सरकारले निर्णय भकाभक । साँच्चै नै भएन खासै विरोध । छापे एक–दुईटा पत्रिकाले विरोधजस्ता लाग्ने लेख र आलेख अनि सम्पादकीयहरु । ‘एक–दुईटा पार्टी हुन् कि होइनन्’ अझै भन्दा नेता पनि भित्रिने र बाहिरिने खेलका अग्रणी सायद्मा गनिन्छन् उनी । भने– यसलाई बेमौसमी बाजा । अर्का पनि थिए सायद् त्यस्तै भने, सङ्घीयता नदिने षड्यन्त्र । अर्काले ‘पूर्वाधार नपुगी नगरपालिका ।
यस्तै र यत्रैमात्र स्वरहरु गुन्जिए गगनमा । बिस्तारै सुस्तायो यो स्वर मीठो गरी । मानौँ भारी आँधीहुरीपछि आएको बर्खा र त्यसपछिको निर्वेद शान्ति ।
उही युधिष्ठिरले ‘नरो वा कुन्जरो वा अश्वत्थामा हतोहत’ भन्ने वाक्यांशमध्ये नरो वा कुन्जरो वा भन्ने वाक्यांशचाहिँ सुस्तरी भनेर गुरू द्रोणाचार्यलाई रनभुल्लमा पारेझैँ विरोधी नेताहरुले पनि जनतालाई एकछिन रनभुल्लमा पारे । त्यसपछि भए शान्त ।
साँच्चै सरकार पनि मख्ख र जनता पनि । थाहै छैन बरा यी सर्वसाधारणलाई । गाविस नगरपालिकामा दरिएपछि अहिले त स्वादै मानेका हुँदा हुन् तिनले । सबै खाले महसुल ह्वात्तै बढेको थाहै पाउन्नन् अहिले । जब पाउँछन्
पत्तो अनि धारे हात लाउने छन्, मज्जैले । अनि मेरो गाउँ फिर्ता देऊ भन्दै सुरू हुनेछ भ्यागुत्ते कराइ । नभन्दै यही पङ्क्तिकार पुग्यो जग्गा कर तिर्न र चार किल्ला प्रमाणित माग्न नगरपालिका कार्यालय । गाविसका रुपमा छँदा आव ६८÷६९ मा रू. ५ तिरेको ठाउँमा नगरपालिका भएपछि लाग्यो ३० रूपियाँ । अनि पहिले लाग्ने गरेको चारकिल्ला प्रमाणित गरिदिएबापत लाग्ने दस्तुर ३०० बाट रू. ५२० । सम्झेँ, बुझेँ अनि भोगेँ– नगरपालिका हुनुको
लाभ । विकासे अभिलक्षण साँच्चै छ खल्ती रित्याउने खालको ।
छन् त औद्योगिक प्रतिष्ठानका रुपमा स्याल प्mयाक्ट्री र यसको हुइयाँ । जिल्ला पूरै नगरपालिकामय । छैनन् कतै कुनै गाउँ समिति बाँकी । अब दुम्मु पनि पाइन्न कान्तिपुरीमा, खोजी मरे पनि भेटिन्न । विकासको उत्कर्ष प्राप्त जिल्ला । डाँडाकाँडा जहाँ बाटो त के काँडाघारी मात्रै छ लटरम्मै । भए गाउँगाउँ नै नगरपालिका ।
गरपालिका भए कस्तो हुँदो हो भनेर जनता अहोरात्र आश गर्छन्, तर यहाँ मात्र भइदिन्छ नगरपालिका । उहिले बच्चैमा पढिया थियो, रिट्ठाको बोट रोपेर कहाँ फल्दछ कागती ? हुन पनि हो, हामीले रोपेकै बीउ हो नगरपालिका । अनि कस्तो गरपालिका खोज्नु ? त्यसैले, जताततै नगरपालिकै नगरपालिका । तमाम फोहोर फाल्ने, भुसिया कुकुर पाल्ने, चोर डकैत र काला बजारिया पाल्ने, यौनकर्मी र दुराचारी पाल्ने तर नियम, कानुन र व्यवस्थाचाहिँ नपाल्ने क्या आनन्दको छ, गरपालिका तर भन्ने गरिन्छ नगरपालिका । पहिले हामी पढ्थ्यौँ ः
‘असतोमा सद् गमय
मृत्योर्मा अमृतं गमय’
अर्थात्, असत्य भएका ठाउँमा सत्य, अन्धकार भएका ठाउँमा उज्यालो, अकाल मृत्यु भएका ठाउँमा प्राणदाता अमृत देऊ । तर, उहिलेको पढाइ र अहिलेको पढाइ र गराइमा पनि छ ठूलै अन्तर ।
अहिले त सरकारका गरपालिकाहरु नै आफैँ नगर र पालन पनि नगर भन्छ र यसको कार्यान्वयन गर्नमा पनि उत्तिकै दिन्छ जोड । रिसाएर नखा र नपढ भन्दा खा र पढ भन्ने अर्थ लागेझैं नगरपालिका भनेको गरपालिका भन्ने अर्थ पनि लाक्षणिक कोणबाट लाग्छ । तर, यहाँ काम गराइको शैली हेर्दा लाग्दैन त्यस्तो । किनकि, शुद्धतामा अशुद्धता मिसाएर बेच्न सिकाउने अनि साह्रै धोका र बेइमानी मात्र बढ्न र बढाउन प्रेरित गर्ने । मानवता प्रेम र अमनचयन खोस्ने । सद्धेलाई असद्धे र निरोगीलाई झट्टै रोगी बनाउन सफल । सायद्, यसैले भन्न थाले मान्छेले नगरपालिका ।
कसैले भन्दा हुन्, यो त संस्कृत शब्द हो । यसलाई व्युत्पादन गर्न मिल्दैन । हो मिल्दैन, तर यहाँ केचाहिँ मिल्ने कुरा भएको छ र ? सबै छन् उल्टामात्रै । यसैले राखे मान्छेले नेपाली नाम नगरपालिका, काम र नाम ठ्याक्कै मिल्ने । सायद् यो नाम तपाईंलाई पनि ठिकै लाग्यो कि ?
ईश्वरलाई कहाँ खोज्ने ?
दसैँका ती उत्सवमय दिनहरु